မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက တာတိုပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် နှစ်စင်းအား အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ JCS ပြောကြား - Xinhua News Agency
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် ရထားပေါ်မှ နေ၍ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ အကွာအဝေးရှိ ပစ်မှတ်အား ထိမှန်စေခဲ့သော ဒုံးကျည်တစ်စင်း ပစ်လွှတ်နေစဉ်(ဓာတ်ပုံ-KCNA via Xinhua)
ဆိုးလ် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အရှေ့ဘက်ရေပြင်ထဲသို့ တာတိုပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် နှစ်စင်းအား ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်အတွင်း စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ပစ်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် (JCS) က ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်သည် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ ၅၀ မိနစ် နှင့် ၈ နာရီ ၅၄ မိနစ်ခန့်တို့တွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံးယမ်းမြို့ရှိ Sunan လေယာဉ်ကွင်းမှ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းသို့ အရှေ့မြောက်ဘက်ကို ဦးတည်ပစ်လွှတ်ခဲ့သည့် တာလတ်ပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ ဖြစ်မည်ဟု ယူဆရသည့် ဒုံးကျည် နှစ်စင်းအား ထောက်လှမ်းမိခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် JCS က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပစ်လွှတ်ခဲ့သည့် ဒုံးကျည်များသည် အမြင့်ပေ ၄၂ ကီလိုမီတာဝန်းကျင်တွင် ၃၈၀ ကီလိုမီတာခန့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့၏ ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ရှိသူများက ယင်းတို့အား ထပ်မံ၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တိတိကျကျဆန်းစစ်နေကြောင်း JCS ထံမှ သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်သည် အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြောင်း နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ံငံက ဖြစ်နိုင်သည့် နောက်ထပ်ပစ်လွှတ်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် အသင့်အနေအထား ရှိနေကြောင်း JCS က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ယခုပစ်လွှတ်မှုသည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ယခုနှစ်အတွင်း လေးကြိမ်မြောက် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ KCNA သတင်းဌာနက ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် မီးရထားဖြင့်သယ်ဆောင်ပစ်ခတ်သည့် ဒုံးကျည်တပ်ရင်းသည် ဗျူဟာမြောက် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် နှစ်စင်းအား စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် အပတ်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် နှင့် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တို့တွင် အသံထက်မြန်သော ဒုံးကျည်တစ်စင်းစီအား အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ထိပ်သီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ(NSC)သည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် အခြေအနေများ တည်ငြိမ်စေရေး အလျှင်အမြန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြန်လည်ပြုလုပ်ရေးအတွက် အလေးပေးသော အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
3rd LD Writethru: DPRK fires2short-range projectiles to Eastern coast — S.Korea’s JCS
SEOUL, Jan. 17 (Xinhua) — The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) fired two short-range projectiles into eastern waters, the fourth launch in less than two weeks, South Korea’s Joint Chiefs of Staff (JCS) said Monday.
The JCS said inastatement that the South Korean military detected two projectiles, presumed to be short-range ballistic missiles which were launched northeastward to the Eastern coast from the DPRK’s Sunan airfield in Pyongyang at about 8:50 a.m. and 8:54 a.m. local time each.
It marked the DPRK’s fourth projectile launch this year. The DPRK’s Korean Central News Agency said last week that the railway-borne missile regiment test-fired two tactical guided missiles on Friday.
South Korea’s presidential National Security Council (NSC) held an emergency meeting, emphasizing the importance for the rapid resumption of dialogue in order to stabilize situations on the Korean Peninsula. Enditem
Photo – Photo provided by the Korean Central News Agency (KCNA) on Sept. 16, 2021 shows the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) launchingarailway-borne missile withamission to strikeatarget area 800 km away on Sept. 15, 2021. (KCNA via Xinhua)